Allgedo.com » 2012 » July » 11
Home » Archive Daily July 11th, 2012 Ciidamada dowladda TFG oo howlgalo maanta ka sameeyay degmada Yaaqshiid ee gobalka Banaadir. Jul 11, 2012 Ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa maanta waxay howlgalo balaaran ka sameeyeen degmada Yaaqshiid ee gobalka Banaadir iyagoona soo qab qabtay hub iyo walxaha Qarxa.
Ciidamada Nabad sugida oo howlgaladaan sameeyay ayaa waxay soo qabteen dhalinyaro la sheegaayo inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab iyo sidoo kale hub u badan walxaha qarxa.
Khaliif Axmed Ereg oo ah taliyaha gobalka Banaadir ee ciidamada... Raiisul Wasaaraha oo la kulmay Safiirka Britain ee Soomaaliya, Gudiga Olombikada Soomaaliya iyo Wasaaradda Dhaliyaradda,& Ciyaaraha. Jul 11, 2012 Muqdisho, July, 11, 2012——Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta kulamo la qaatay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Britain Matt Bough, Gudiga Xiririka Olombikada Soomaaliyeed, iyo Wasaaradda dhaliyaradda iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Iyagoona ka wada hadlay qaabkii ay uga qeybgeli lahaayeen Ciyaartooyda Soomaaliyeed Ciyaaraha Olombikada Adduunka oo lagu... Ciidamada dowladda TFG iyo kuwa AMISOM oo la wareegay Deegaanka Laanta Buuro. Jul 11, 2012 Ciidamada dowladda TFG iyo kuwa AMISOM ayaa maanta dagaal waxay kula wareegeen deegaan lagu magacaabo Laanta Buuro kaa oo ku dhaw degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal iyadoona dagaal kale weli uu ka socdo duleedka degmadaasi.
Ciidamada ayaa fariisimo ka sameestay deeganka Laanta Buuro, waxaana dhanka kale saraakiisha dowaldda TFG ay sheegayaan inay tagaayaan ilaa degmada... Maqaal ku saabsan tarbiyada awlaada – By Maxamed Ibraahim. Jul 11, 2012 Awlaadu waxaykamid yihiin nimcooyinka waaweyn ee ale nasiiyey la,aantoodna aanan xasili karin qofkii ilaahay u diidana wuxuu ku bixiyaa maal aad u farabadan haduu heli karo wuxuu u maraa meelo badan sida: isbitaal, ducaysi iyo ala bari farabadan, talo raadin, dadka qaarkiina waxay ku xanbaaraan samaynta wax,aan sharci ahayn wayna adkaataa in qofku uu sifududu u sabro.
Dhibka aan umarno korinta... Iqra iyo Al-qaarica “waa maanso cusub oo uu tiriyay abwaan Abdulahi Isim” Jul 11, 2012 Asc. dhammaan ummadda soomaliyeed meel aad joogtaanba. Allaah (SWT) ayaa mahad leh, Rasuulkiisa Maxamed (SCW) ayaa sharaf leh. Waxaan halkaan idiinku soo gudbinayaa suugaanta hoos ku xusan.
Suugaantan ama maansadan ayaa ka curatay maqaal ku soo baxay Shabakad ka mid ah Shabakadaha warbaahinta Soomaaliyeed, maqaalkaas ayaa xambaarsanaa Eray macnihiisu ahaa (YAY EERSANDOONTAA?). Ummadda soomaliyeed... Radio Allgedo/ Waraysiyo